Rebel Inc. 1.3.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.3.3 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား သြင္တူျပဳျခင္း Rebel Inc.
Rebel Inc. ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင်လက်နက်ကိုင်ရပ်တန့်နိုင်သလား? ဘေး Inc ၏ဖန်တီးသူကနေထူးခြားတဲ့နှင့်နက်ရှိုင်းစွာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံရေး / စစ်ရေးမဟာဗျူဟာအခြင်း simulation လာပါတယ်။
အဆိုပါစစ် '' ကိုကျော် '' ဖြစ်ပါသည် - ဒါပေမယ့်ငါတို့ရှိသမျှသည်တစုံတခုကိုမျှမဆိုလိုငါသိ၏။ တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်စေရန်, သင်သည်လည်းပါဝါရယူရာမှသောင်းကျန်းသူရပ်တန့်နေတုန်း, လူတို့စိတ်နှလုံးတို့ကိုအနိုင်ရစစ်တပ်နှင့်အရပ်သားဦးစားပေးဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်!
သန်း 120 ကျော်ကစားသမားတွေနှင့်အတူအစဉ်အဆက်လူကြိုက်အများဆုံး paid ဂိမ်းတွေထဲက - သူပုန် Inc က '' ဘေး Inc က '' ၏ဖန်ဆင်းရှင်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဂိမ်းအသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်လှပပြီးဂရပ်ဖစ်များနှင့်ပြင်းထန်စွာကောင်းချီးဂိမ်းတွေနဲ့ကွပ်မျက်ခံရ - သူပုန် Inc ကိုခေတ်မီတန်ပြန်သောင်းကျန်းသူများ၏ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်အကျိုးဆက်များအားဖြင့်မှုတ်သွင်းနေတဲ့နက်ရှိုင်းစွာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့, မဟာဗျူဟာမြောက်စိန်ခေါ်မှုပေးထားပါတယ်။
ကျယ်ပြန့်သုတေသနအပေါ်အခြေခံ● Highly အသေးစိတ်, Hyper-လက်တွေ့ကမ္ဘာကြီး
● Intelligent မဟာဗျူဟာနှင့်နည်းဗျူဟာ AI အ
●အပြည့်အဝကို Save လုပ်ရန် / Load လုပ်ဆောင်ချက်ကို
တစ်စိတ်ကူးယဉ်ဂိမ်းသော်လည်း, သူပုန် Inc ကိုအရေးကြီးသောအစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်ကိစ္စများမှာကြည့်နှင့်ကျွန်တော်မျိုးသူတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိသမျှကြိုးစားအားထုတ်ရာ၌ခန့်ထားပြီ။ အဆိုပါဂိမ်းကျယ်ကျယ်သုတေသနပြုခဲ့ပြီးဦးဆောင်ဒေသဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးသမားများ, စီးပွားရေးလူများနှင့်စာနယ်ဇင်းသမားများအဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေ, ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အစိုးရများနှင့် ပူးပေါင်း. တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျာမန်ပြင်သစ်, စပိန်, ပေါ်တူဂီ, အီတလီ, ကိုရီးယား, ဂျပန်, တရုတ် (ရိုးရာ), နှင့်ရုရှားအတွက်ဒေသတွင်း။
ငါမွမ်းမံမှုများအတွက်အစီအစဉ်များကိုအများကြီးရရှိပါသည်! ထိတွေ့ Get ငါ့ကိုသင်တို့ကိုတွေ့မြင်ချင်သောအရာကိုသိကြကုန်အံ့။
Rebel Inc. အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Rebel Inc. အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Rebel Inc. အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Rebel Inc. အား အခ်က္ျပပါ
widel111 စတိုး 68 89.03k
Rebel Inc. ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Rebel Inc. အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Ndemic Creations
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.ndemiccreations.com/en/24-legal
Release date: 2019-06-16 17:34:06
လက်မှတ် SHA1: 3B:EE:9D:FD:54:68:CD:A8:9C:28:AA:E2:2C:8F:FA:6F:02:16:EF:FF
အဖွဲ့အစည်း (O): NdemicCreations
Rebel Inc. APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ